သက်ဝေ: တိမ်အလိပ်လိပ် နှင့် ငွေအစိတ်
SDL January 7, 2010 at 4:17 PM
ပိုက်ဆံ (၂)သောင်း ပို့လိုက်ပါ။
Nge Naing January 7, 2010 at 5:14 PM
ငွေအစိတ်ကတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ တိမ်အလိပ်လိပ်က ဘာဘာလိမ့်။
:) တိမ်အလိပ်လိပ်နဲ့ ငွေအစိပ်..
လမ်းကြုံရင် ဓါတ်ပုံလှလှလေး ရိုက်ပေးပါရန်။
P.Ti January 7, 2010 at 5:41 PM
ဘလော့ကြီးပေါက်သွားလို့ ပြင်ဖို့ ငွေနှစ်ရာလောက် ပို့လိုက်ပါ။ :P
အဆောင်နေပြီး အိမ်ကို ငွေပြန်မမှာရတာကိုက ကံခေခဲ့တာပါကွယ် အဟင့်။ လုံလောက်အောင်ပေးထားလို့တော့ မထင်နဲ့။ အိမ်နဲ့နီးလို့။ လော်ဂရပ်သမ်တို့၊ တီစကွဲယားတို့ဆိုတာ အမေက ကလူသစ် ကျောင်းမတက်ခင်ကထဲက နောကျေပြီးသား :(
အပြုံးပန်း January 7, 2010 at 8:08 PM
တုံးလိုက်တာနော် (ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောတာပါ)
PAUK January 8, 2010 at 12:29 AM
khin oo may January 8, 2010 at 12:50 AM
ကြည် January 8, 2010 at 1:11 AM
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးလှလိုက်တာ တိမ်အလိပ်လိပ်နဲ့လို့ ပြောချင်တာများလား?
ရွှေရတုမှတ်တမ်း January 8, 2010 at 4:44 AM
စာလာရင်ငွေလိုလို့ ..စာမလာရင် နေကောင်းလို့ဆိုပြီး..
မီယာ January 8, 2010 at 6:52 AM
မုန့်ဖိုးတောင်းနည်း တမျိုးပေါ့နော် အဲ့ဒီခေတ်က အစိတ်က တလစာ လောက် ရမယ်ထင်တယ်နော်
သက်ဝေ January 8, 2010 at 9:14 AM
တိမ်အလိပ်လိပ် နဲ့ ငွေအစိတ်ပို့လိုက်ပါ ဆိုတာက မဆီမဆိုင်နဲ့ ပိုက်ဆံပို့ခိုင်းတဲ သဘောပါပဲ... မီယာပြောသလို မုန့်ဖိုးတောင်းနည်း တမျိုးပေါ့... ဒီ့ထက် နက်နဲတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ မရှိပါဘူး...။
တိမ်တွေရှိတယ်... ငွေအစိတ်ပို့လိုက်ပါ လို့ ပြောတာပေါ့လေ...
Blind Shot ပေါ့...း))
လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ရေးသွားကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ကိုယ့်ရဲ့ မရှင်း မရှင်း အရေးအသားကြောင့် တွေးမရတဲ့သူတွေ ဆောရီးပါ...။
အိုကေ... Haveanice weekend ahead...!!!
Hmoo January 8, 2010 at 9:54 AM
Need2repair hunting rifle :) (mail of my friend University student2his parents ,he is son of .... )
sonata-cantata January 8, 2010 at 12:34 PM
ကိုကြီးကျောက် ဆီဘောက်စ်မှာ ပြောသွားသလို ဒီတခါ ဆယ်ဆတိုးသွားတာ တို့လည်း သတိထားမိတယ်။
တိမ်တွေဟာ သိပ်လှတာပဲ ... ယုံလိုက်ပါ
ကိုကြီး အစား မျက်ခုံးလှုပ်လိုက်တာ
ချစ်ကြည်အေး January 8, 2010 at 7:45 PM
" ဖတ်ဖို့ ရောက်တာ သုံးရက်
ခုလိုလာ ရှင်းပြမှ .... သိပါတယ်ကွာ
ဆရာ လာ မလုပ်နဲ့......."
(ချစ်ခဲ့ တာ ၄နှစ် ၊ အပြစ်မဲ့စွာ ဝေးလွင့် သံစဉ် နှင့် ဆိုရန်...)
ပုံ/ စိုင်းစိုင်း ချစ်ကြည်
mae January 12, 2010 at 7:48 PM
မမသက်ဝေလဲ တိမ်နဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ မပါရငါ post မတက်တော့ဘူး၊ ဟိ.. ချစ်လို့စတာ